ဗေဒင်ကဏ္ဍ Archives - POPPIN NEW
၁၅.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၁.၉.၂၀၁၉ ထိ တစ်ပါတ်စာ တားရော့ဟောစာတန်း
Pop Pin New September 15, 2019
(၇)ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက် ၁၅.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၁.၉.၂၀၁၉ ထိ တစ်ပါတ်စာ တားရော့ဟောစာတန်း အားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပီး လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ…. တနင်္ဂနွေ သားသမီးများတွက် (၇)ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက် ၁၅.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၁.၉.၂၀၁၉ ထိ တစ်ပါတ်စာ တားရော့ဟောစာတန်း1 တနင်္လာသားသမီးများအတွက် (၇)ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက် ၁၅.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၁.၉.၂၀၁၉ ထိ တစ်ပါတ်စာ တားရော့ဟောစာတန်း2 အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် …
အိပ်ကပ်ထဲ ပိုက်ဆံပြတ်လျှင် ဆန်စေ့အနည်းငယ် ဆောင်ထားပါ
Pop Pin New September 10, 2019
ငွေကြေး၊ အလုပ်အကိုင် နှင့်ပတ်သက် သော စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေသူများအတွက် ကုစားနိုင်သည့်နည်း ၃မျိုးရှိသည်။ ပိုိက်ဆံပြတ်နေလျှင် ဆန်စေ့အနည်း ငယ်ကို ပိုက်ဆံအ်ိတ်ထဲဆာင်ထားပါ။ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးတိုးပွားစေရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ နည်းများမှာ ၊ဆန်ကိုအသုံးပြု ခြင်းပါဝင်ပြီး ဆန်သည်ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ဆန်ကို မင်္ဂလာရှိသည့် ကိစ္စများတွင်သုံးသည်။ ပြီးပြည့်စုံ သည် သို့မဟုတ် မည်သို့မျှခွဲ၍ မရနိုင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ (၁) အလုပ်မှာအဆင်မပြေသူများ၊ သောကရောက်သူများ၊ …
Pop Pin New September 9, 2019
သောကြာသားသမီးများ ထီဆုကြီးများပေါက်နိုင်သည့် ထီးနန်းသုံးအာယုစန်း နက္ခတ်အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချိန်အခါဖြင့် မိခင်လောင်းများ သင့်ရင်သွေးရတနာကို ခွဲစိတ်မွေးဖွားရယူပါက လွန်စွာပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာသည့် ကဋေရှစ်ဆယ်ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝသော သူဌေးသား-သမီး ရတနာကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်။ (ရှေးခေတ်ကျမ်းဂန်ပါအသုံးအနှုန်း) ရင်သွေးမွေးဖွားပြီးသည်မှ အသက်(၈)နှစ် အတွင်း မိဘများ သုံးစွဲလို့မကုန်နိုင်အောင် ငွေကြေးအမြောက်အများ ရရှိလာမည်။ သာမန်လူပင်ဖြစ်ပါစေ မုချသူဌေးသူကြွယ်များအဖြစ် ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ရင်သွေး အသက်(၁၇)နှစ်မှ(၄၄)နှစ်အတွင်း ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ်မှာပင် ကဋေရှစ်ဆယ်ကြွယ်ဝသော မဟာသူဌေးမင်း …
သင်လှတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးပုံစံကနေ ခန့်မှန်းပြမယ့် သင့်အကြောင်း
Pop Pin New September 8, 2019
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး သင့်အကြောင်း ခန့်မှန်းပြမယ် လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်နေစိတ်ထားချင်းမတူပါဘူး။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အမျိုးမျိုးပါပဲ။ သင့်မျက်လုံးထဲ လှနေတဲ့အရာက တခြားလူအတွက် လှချင်မှလှနေမှာပါ။ သင့် ရွေးချယ်မှုတွေက သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သင်လှတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးပုံစံကနေ သင့်အကြောင်းကို ပြောပြပါမယ်။ လှတယ်ဆိုတာက ပုံသေမရှိပါဘူး။ ကြည့်တဲ့သူရဲ့ …
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ (၈.၉.၂၀၁၉ မှ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက် မှ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် ထိ) တနင်္ဂနွေ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ (၈.၉.၂၀၁၉ မှ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း 1 တနင်္လာ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ (၈.၉.၂၀၁၉ မှ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ်ပတ်စာ …
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာ များနိုင်ပါတယ်။ ကဲ အကြိုက်ဆုံး ပုံ ရွေးပြီးပြီလား? ပုံ (၁) သင်က နံပါတ် …
တစ်ပါတ်စာ(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း (05.9.2019 မှ 11.9.2019 အထိ)
05.9.2019 မှ 11.9.2019 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူတွေ အတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိပေမဲ့ မရင့်ကျက်တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ် လောက် လုပ်လုပ်အသိအမှတ်ပြုမခံရတာမျိုးတွေ၊ ချီးကျူးမခံရတာမျိုးတွေကြောင့် စိတ်ပျက်နေမိတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာလဲ မိမိစေတနာထားပေမဲ့ မျက်နှာမရသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ပြောင်း၊အိုးပြောင်း၊ရုံးခန်းပြောင်း ဆိုတာမျိုးတော့ ဒီကာလမှာမသင့်ပါဘူး။ မိသားစုဝင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့်မိမိငွေထွက်ရတတ်ပါတယ်။ လက် ကားစီးပွားလုပ်သူများ မရင်းနှီးသေးတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို အရမ်းအများကြီးဝယ်မလှောင်မိပါစေနဲ့ ။ ငွေအိပ် တတ်တဲ့ကာလမို့ပါပဲ။ …
စနေသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း***
Pop Pin New September 4, 2019
စနေသားသမီးများအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း*** စီးပွားရေး*** စနေသားသမီးတွေကတော့ စီးပွားရေးမှာ အတော်လေး အခက်အခဲ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ကိုယ့်ဆီ အားပေးနေကြဖောက်သည်တွေ အခြား မိမိနဲ့ လုပ်ငန်းတူသူတွေဆီ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဖောက်သည် အသစ်လည်း ထပ်မတိုး၊ဖောက်သည် အဟောင်းလည်း ပျက် ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ အခက်အခဲဖြစ်ကြမည်။ဝန်ထမ်းတွေလည်း အထက်လူကြီးတွေကြောင့် စိတ်ပျက်ပြီး ထွက်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပြီး အလုပ်ထွက်ကြလိမ့်မည်။ ယတြာ=ရေဘေးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ နေရာမှာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး လှူ …
သောကြာသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
သောကြာသားသမီးများအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း*** စီးပွားရေး*** အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေရင်လည်း အခွင့်အရေးက က်ိုယ့်ကိုလိုက်ရှာလိမ့်မည်။အခွင့်အရေး ရပြီဆိုလည်း လက်မလွှတ်စေနဲ့တော့ပေါ့။ဒီလမှာ အလုပ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးရဖို့ရှိပါတယ်။မိမိရရဆုတ်ကိုင်နိုင်ဖို့သာ အရေးကြီးပါတယ်။အလုပ်ပါးနေသူတွေလည်းဘအလုပ်တွေ လှိုင်လှိုင်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ခရီးသွားကုန်သည်တွေတော့ သိပ်အဆင်ပြေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယတြာ=သံပုရာရည် အေးအေးလေးဖျော်၍ အိမ်ဘုရားကို ကပ်လှူ ပေးပါ။ ငွေကြေး*** ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့ ဘုရင်ဘဲ။လက်ထဲမှာ ငွေမရှိပေမယ့် ရှားလည်းမရှားပါဘူး။ရစရာတွေ တစ်ပုံကြီးရှိနေပြီး …
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း***
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း*** စီးပွားရေး*** အရောင်းအဝယ်တွေ အရမ်းကောင်းမည်။တပည့်အသစ်တွေ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေ တိုးမည်။အလုပ်တိုးချဲ့လိုသူများ ဒီလက အကောင်းဆုံး လ ပါ။အပြောင်းအရွှေ့တွေတော့ သိပ်မကောင်းဘူး။အထူးသဖြင့် အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့။အလုပ်သစ်တွေလည်း စလုပ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ယတြာမလိုပါဘူး။ ငွေကြေး*** ငွေကတော့ လည်ပါတ်အားကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ငွေအများကြီးဝင်တတ်ပါတယ်။ကျောက်အောင်တာတို့၊ထီပေါက်တာတို့ပေါ့။ဝင်ငွေများမှာဖြစ်သလို ထွက်ငွေလည်း အင်မတန်များနေမှာဖြစ်ပါတယ်။များပါစေ။တစ်ဖက်က ထွက်လေ တစ်ဖက်က ဝင်လေပါဘဲ။ပိုကောင်းအောင် ယတြာလေးလုပ်ပေးကြပါ။ ယတြာ=လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်များ …